Madaxweyne Xasan iyo madaxweyne Obama oo isku arkay Aqalka Cad – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 6 August 2014 7 August 2014
Mreeg.com: Madaxweynaha Maryekanka Barrack Obama ayaa xalay aqalka cad ee Mareykanka ee magaalada Washington casho sharaf ugu sameeyay madaxda ka qeyb galeysa shirka Afrika iyo Mareykanka oo lagu wado in maanta oo arbaco ah lasoo gabagabeeyo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qeyb ka ah ilaa 47 hoggaamiye Afrikaan ah oo ka qeyb galaya shirka, wuxuuna kamid ahaa madaxdii xalay ka qeyb galay cashada.
Madaxweynaha Mareykanka Barrack Obama oo madaxda kusoo dhaweeyay aqalka cad ayaa xusay in inkabadan laba qarni aqalka cad ee Mareykanka lagu soo dhaweeyay madax ka socotay caalamka, balse ay tahay markii ugu horreysay taariikhda oo madax intan la eg ay ku kulmaan, taasoo uu ku sheegay inay tahay mid tariikhi ah oo sharaf u ah maamulkiisa.
Obama ayaa tilmaamay in madaxda Afrikaanka iyo Mareykankuba ay u taagan yihiin sidii loo hormarin lahaa mustaqbalka jiilka cusub ee Afrika, isagoo xusay inuu arkay dhalinyaro Afrikaan ah oo wax badan oo horumar ah mustaqbalka kusoo kordhin kara qaaradda Afrika
Wuxuu ugu baaqay dhammaan Afrikaanka inay isku yimaadaan oo ay kawada shaqeeyaan Afrikada cusub oo ah mid ku dhisan nabad, barwaaqo iyo caddaalad , taasoo uu ku sheegay inay u qalmaan inay helaan dadka Afrikaanka ah.